Wasiir Fiqi oo booqday taliska ciidanka badda Galmudug, ballan-qaadna sameeyay +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wasiir Fiqi oo booqday taliska ciidanka badda Galmudug, ballan-qaadna sameeyay +(SAWIRRO)
Wasiir Fiqi oo booqday taliska ciidanka badda Galmudug, ballan-qaadna sameeyay +(SAWIRRO)
Hobyo (Halqaran.com) – Wasiirka Amniga Gudaha ee Dawalad Goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa Jimcihii maanta booqday taliska Ciidamada Badda ee Booliska Galmudug ( Galmudug Maritime Police Unit) oo saldhigoodu yahay magaalada Hobyo.
Fiqi ayaa warbixin ka dhagaystey taliyaasha ciidanka, isagoo faah-faahiyey baahida loo qabo ciidamada Badda Galmudug iyo muhimadda ay ugu fadhiyaan Galmudug-ta cusub.
Wasiirka Amniga ee Galmudug, Axmed Macallin Fiqi ayaa u ballanqaaday in la tayeyn doono ciidamada Badda Galmudug si ay ugu guuleystaan ilaalinta maraakiibsta sida sharci darrada ah u kalluumeysta.
Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa waxaa ay horay ula wareegtay maleeshiyaad iyo Gaadiid dagaal oo ku sugnaa deegaanno ka tirsan gobolka Mudug, kuwaas oo la sheegay in laga dhigayo Ciidamada Daraawiishta Galmudug.
Taliska ciidanka badda